50 8tracks Playlists talinayo u Hawlaha kala duwan
Music ayaa qeyb weyn ka ah nolosha qof kasta. Music aan, dunida noqon doona si weyn u kala duwan si xun. Waxaa Kor U Qaadi Karaa ka mid ah hal-abuurka iyo maskaxdaada. Waxa kale oo ka dhigaysa wax ka badan oo xiiso leh oo xiiso badan. In hawl kasta oo aan ku sameeyo nolosha, music noqon kartaa qeyb weyn, sidaas darteed halkan waxaa ka mid ah playlists talinayo weyn 8tracks in ay dhagaystaan ​​inta aad waxbarashada, shaqada soo baxay, faraxsanahay, dareen funny, iyo haddii aad rabto in ay dhagaystaan ​​ugu heeso caan ah oo maanta.
Qeybta 1: Top 10 Playlists Study
Qeybta 2: Top Playlists 10 tababarka
Qeybta 3: Top 10 Popular Playlists
Qeybta 4: Top 10 Happy Playlists
Qeybta 5: Top 10 Funny Playlists
Ma waxaad isku diyaarinaya imtixaan ama warqad ah in ay sabab ugu dhakhsaha badan? Markaas dabadeed isku day dhagaysiga muusigga inuu kaa caawiyo inaad xooga saarto. Waxaa laga yaabaa inay ka sii raalli yahay inaad wax ka barato oo la fanaaniinta weyn kugu hayso shirkadda, iyo baaritaano badan oo la sameeyay ayaa muujiyay in ay dhagaystaan ​​shidaalka music qaybaha kala duwan ee maskaxda. Hoos waxaa ku qoran playlist lagu taliyey 8trackt in ay dhagaystaan ​​halka aad waxbarato.
1. daboolida Beautiful iyo loomana baahno
Tani waa playlist ka kooban 37 songs of songs qurux breathtaking daboolay heesaa weyn oo ku qumman inay dhegaystaan ​​halka waxbarasho ama si fudud loo fikiro oo lagu nasto ee sariirta.
Isku darka waxa uu ka koobanyahay 19 biyaano qurux daboolayaa inuu kaa caawiyo inaad xooga saarto marka aad waxbarasho ama shaqo iyo u baahan yihiin dhiirigalin si ay si fiican shaqada. Sidaas si ay u awoodaan inay kaa caawiyaan inaad diirada aad hawlaha niyad, tixgelin la dhageysto playlist this.
3. loomana baahno Soul
Tani waxay isku dhafka 8tracks ka kooban 18 kuwan raadkaygay in ay maamulaan 1 saac iyo 4 daqiiqo, waqti ku filan inay ku dhameystaan ​​maqaalka ay muujinayso ah ee aad shaqada guriga sabab Isniintii. Songs halkan ku qoran yihiin version loomana baahno ee ugu heeso caan ah oo maanta si ay kaaga caawiyaan in aad ku xasisho maskaxdaada halka waxbarasho.
Isku darka waxa uu ka koobanyahay 27 kuwan raadkaygay in hubaal kaa caawin doona inaad kicin intaad Waantoobaysaan marka aad dembeysa imtixaanka maalinta ku xigta. Dhegayso daboolida qalabka weyn halka dib u kaa caawinaya in aad hesho darajooyinka wanaagsan!
5. cuna. Hurdada. Study. Ku celi.
Tani waa ururinta song qurux badan, kuwaas oo intooda badan ay yihiin daboolida piano in sida ugu fiican in ay dhegeystaan ​​haddii aad rabto in ay xooga saarto oo ay diiradda saaraan wax ay yihiin. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad u raaxayn maskaxdaada halka waxbarasho guriga ama si fudud oo nasta ka dib maalin dheer oo shaqo ah.
6. aka waxbarasho pre-med lyfe
Tani waa isku darka abuuray by ah arday pre-med ka University of California ee Los Angeles in ay caawiyaan iyada oo diiradda halka barashada maadooyinka iyada. Oo iyana waxay go'aan cajiib ah u wadaaga on 8tracks! Playlist Tani waxay ka kooban tahay 25 in ay yihiin Gaarna u qurux badan in dhegaha qalabka kuwan raadkaygay cover.
7. stop welwelo si ka badan
Tani waxay isku dhafka qurux badan leeyihiin 24 songs kaa caawinaya in aad illowdo in wax walba oo ka dhigaysa in aad ka welwelaysaa oo aad xooga saari karaan waxbarasho ama haddii aad u doonayaa inaan u unwind oo illooba oo dhan ka walwal qabo adduun ahaan idiin siinayo.
8. Waxaad Heli Iyada Finals
Sida horyaalka soo jeedisay, isku dhafka ah ee 39 qurux daboolida song kaa caawin karaan inaad sii track markii baranaya finals aad. Wax ay ka fiican tahay waxbarasho markuu maqlay qaar ka mid ah oo ka mid ah shaqooyinka fanka iyo in muddo ah, aad dareentid sida ma jiraan wax qilaaf ah ee dunida oo dhan.
9. Study Love Waxaad
Tani waxay isku dhafka ah ee 15 songs kaa caawin doona inaad sii dhiiri halka aad wax ka baraneyso, buug akhris, ama kaliya nasto cabo shaaha ama kafeega kulul. Isku day in ay dhagaystaan ​​this playlist qurux badan oo ha idinku qaadan dunida ah oo kala duwan buuxiyey jacayl iyo positivity.
Tani waa playlist 15 daboolida qalabka qurux badan in aad ku dhawri doontaa, oo xawaal ka imtixaanka dugsiga cadaadiska ina siinaysaa. Tani waa uun dhab ahaan waxa aad u baahan tahay mar kasta oo aad dareemaan walwal, sababtoo ah maalinta oo dhan ah oo lagu daalo ee shaqada ama dugsiga.
Dhagaysiga muusigga, halka ka shaqeeya ma aha run ahaantii wax cusub. Cilmigu wuxuu caddeeyay in dhagaysiga muusigga jeedineysaa ciyaartoyda ka dareemayso xanuun ama daal ka shaqeeya. Iyo cilmi dhawaan uu ogaado in aan dhagaysto oo keliya, laakiin xakamaynta iyo samaynta music in tallaabo ka mid ah ayaa tallaabo ayaa saamayn xitaa qoto dheer shaqeeya. Hoos waxaa ku qoran ugu sareeya 10 playlists on 8tracks waa in aad u dhagaystaan ​​marka la.
Rabitaan 1. Summer Fitness
Playlist Tani waa isku darka kaamil ah in ay dhegeystaan ​​marka aad ku dhuftey jimicsiga. Waxaa kula socodsiin doonta niyadda loo dhisaa si dhexgelinnin la music inta uusan u dhaqaaqin jirkaaga u tababarka guray.
2. Just u sameeyaan.
Playlist Tani waa qumman yahay in ay dhiiri aad ka bilowdo ama sii socda, ugu fiican marka aad orodka magaalada ama in la tegaan. Wuxuu ka kooban yahay 12 songs in u tagaan 42 daqiiqo, wakhtiga kaliya kaamil ah in maalin walba ay maamulaan.
3. Run in garaaca ah
Playlist Tani waxay ka kooban tahay 13 kuwan raadkaygay inay kugu dhiiri on safarka taam. Oo Sharaxaad leeyahay, tani waa music si ay u ordaan in ka heli doontaa ilaa aad gareeyeen. Sidaas qaadan aad waayo-aragnimo tababarka heerka ku xiga, oo maqla playlist this on 8tracks inta aad qabanayso aad joogtada ah tababarka.
4. Goobjoogayaashayada culus oo garaaca culus.
Playlist Tani waxaa ka go'an u hinjiyeyaasha culus. Tani waxay ka kooban tahay 22 songs in kacdo in ay sii socdaan oo aad safarka taam. Sidaas darteed haddii aad rabto in aad hesho waxyoonay oo wuxuu ku raaxaysan aad tababarka ka sii, inaad si fiican u dhageysta mix this.
5. soo ordi
Playlist Tani waxay ka kooban yihiin 21 songs caawin doona in aad illoobin dadaalka aad samayn marka la. Dhageysiga playlist taasi ka dhigi doonaa in aad rabto in aad u ordaan iyo aad u badan. Tani waa kaamil ah kuwa kaliya laga bilaabo si ay u helaan taam, sidaas darteed tani daro sida mid ka mid ah ku riixaya in aad u qaado.
6. Time 2 tareenka
Tani waa playlist ka mid ah 16 kuwan raadkaygay in ay yihiin fiican ee dadka shaqeeya ee jimicsiga. Waxaa sii doonaa inaad wareeraa ka xanuun iyo daal aad dareensan tahay iyagoo shubaya baxay. Kuwani waa songs kaamil ah si ay u tagaan oo aad ka heli "aaga".
Mix Tani waxay ka kooban tahay 9 kuwan raadkaygay in aan dhiirigelino si aad uga shaqeyso adag tahay inuu taam noqon doono. Xitaa ay farshaxanimada sheegay "Kaliya waxa ay sameeyaan. Xitaa waxaad nuugi" ee lagu dhiirigaliyo in aad si ay u fuliyaan on aan loo eegayn waxa caqabado aad la kulmi doonaa jidka.
Tababarka 8. xagaaga
Tani waa qumman yahay kuwa raba in ay ku haboon u heli xagaagan. Iyadoo 14 kuwan raadkaygay ay aad la kusoo doonaa si ay u joojiyaan wixii aad bilowday iyo ka dhigi doonaa aad rabto in aad kalsooni badan xiran labbiska guray xeebta!
9. Sickness hab tababarka!
Playlist Tani waxay ka kooban tahay 21 songs in ka dhigi doonaa aadan rabin in ay joojiyaan ka shaqeeya. Laxanka heesaha ee isku dhafka ah tan kicin doonaa meel motor ka mid ah maskaxda sida aad shaqeeyaan jirkaaga, taas oo caawinaysa jimicsi is-socod sida socda ama si weyn u miisaan-u qaadeen.
Playlist Tani waxa ay ka dhigtay in ay liiska 10ka playlists talinayo shaqada sababtoo ah songs weyn waxaa ka mid ahaa in isku darka this. In ay sharaxaad uu leeyahay "Xusuusnow aan loo eegin sida aad gaabis u tagaan, weli aad qof walba ay isdul-fadhiga." taas oo run ah oo sax ah.
Halkan waxaan ku soo wada urursaday playlists ugu caansan ee 8tracks maanta. Hoos waxaad ka arki doonaan playlists in ay leeyihiin kooxaha iyo riwaayadaha in goobta ugu.
Iyada oo 1.2 milyan riwaayadaha iyo tirinta, playlist tani waa mid ka mid ah keegag inta badan u ciyaarayay 8tracks. Sida horyaalka soo jeedisay, playlist tani ay tahay sida ugu fiican in ay dhegeystaan ​​marka aad toosto subaxda soo fuul. Wax ay ka fiican tahay laga bilaabo maalinta la shaaha ama kafeega diiran iyo cayaar subaxdii iska.
2. Xisbiga Party Xisbiga
Mix Tani waa kuwa jecel in ay dhagaystaan ​​qoob ka ciyaarka, electro, guriga, dubstep, iyo music kale xisbiga. Best ciyaaray marka saaxiibada xafladeyn!
3. xagaagii hore 2
Summer ayaa kaliya ku bilowday, waana sababta dad badan laga bilaabo si ay u hees xagaaga. Tag xisbiga arrintan playlist qurux badan!
Tani waxay la mid tahay kuwa jecel xafladeyn leh Mash heeso. Tani waa isku duwidda xogta ka mid ah 9 songs in ka dhigi doonaa aad rabto in aad la dheesho inta aad dhagaysanayso, waxa uu.
5. Sound ee Summer
Playlist Tani waxay sii dayn doonaa inaad maqashaan dareenka dhabta ah ee xagaaga. Best si ay u dhagaystaan ​​adoo jiifa on cammuudda xeebta iyo daawado qof walba waxa uu xafladeyn qorraxda hoosteeda.
Nasashada 6. guga
Iyadoo 14 kuwan raadkaygay ku sugan, playlist tani waa mix kale oo loogu talagalay dadka jecel heesaha xisbiga. Marka aad tan dhegayso, waxa ay ka dhigi doontaa in aad rabto in aad u istaagaan ka kursi oo kaliya la dheesho, maalintii oo dhan waa in.
Playlist Tani waa isku dhafka ah ee cusub iyo kii hore music fiican inaad nafisto soo baxay si. Tani waxay isku dhafka ah ee 15 gabayo ku sifayn kala duwan waxaa fiican inaad maqli saaxiibada isagoo cabitaanada qaar ka mid ah oo waqti tayo leh.
Playlist Tani waa isku dhafka ah ee casriga ah hip-hop, rap, iyo music qaboowga. Playlist waxay ka kooban tahay 21 kuwan raadkaygay, taas oo ka dhigi doonaa inaad dareento dabacsan oo partied oo dhan.
9. Days Sunny Halkan mar kale
Playlist Tani waxay ka kooban yihiin 24 kuwan raadkaygay ku sifayn ee kala duwan sida indie, pop, iyo electro. Tani waa qumman yahay safarada wadada dheer ama marti muddo dheer ka mid ah magaalada.
10. 3:24 am Gurtida
Playlist Tani waa kaamil maalmo caajis ama roobabku da'ayana. Music Best in salaaxdo in aad qof gaar ah. Ama xitaa haddii aad kaligaa tahay in aad sariirta, waxaan doonayaa in aad isku dejiso la buug fiican oo koob kulul kafeega.
Waa dhab la yaqaan in dhagaysiga muusigga keliya ka dhigi kartaa inaad dareento wanaagsan, laakiin waxa haddii aad horey u faraxsan oo aad rabto in aad dareento farxad leh music? Hoos waxaa ku qoran ugu sareeya 10 playlists ugu fiican in ay dhegeystaan ​​marka aad aad ugu fiican ama haddii aad hoos u dareento oo aad rabto inaad naftaada kalsoonaada.
Playlist Tani waxay leeyihiin 10 songs in ka Shuqlinayn dareen kasta oo si farxad. Tag xeebta aad bestfriend iyo qarax music this on your ciyaaryahan audio oo xagaaga ugu fiican ee aad naftaada ka dhigin.
2. Kac oo u dhalaalay
Maalin isagoo dhoolacadeynaya la ciyaaro tan qolka bilow marka aad toosto. Tani waxay isku darka 33 kuwan raadkaygay ka dhigi doonaa in aad rabto in aad hesho sariirtiisii ​​Oo aad daqiiqad kasta ku qaataan taas oo ka dhigaysa ugu fiican ee aad awoodo.
Sacbiyaan 3. kaca
Tani playlist of 8 kuwan raadkaygay noqon karaa maalmo buluug farxad gelin. Dhegayso iyo illooba oo dhan walwalka aad qabto in mudo ah oo ay qaataan waqti si ay kaliya ka fekero fikirro ku faraxsanahay.
Waayo, kuwa galay music dalka, waxaa jira playlist idiin. Waa hagaag, xataa kuwa aan dhab ahaan u galay laakiin waxa ay doonayaan in ay ka takhalusaan cirka cirro korkooda, tani waa playlist fiican in ay dhagaystaan.
5. qorax subax wanaagsan
Subax bilow dhoola halka playlist ah 16 kuwan raadkaygay ciyaaro ee asalka ah. Karsado aad quraacda inta aad dhagaysanayso this isku dhafka ah oo qurux badan si ay u dheeraad ah oo xiiso leh iyo delicious!
6. xusuus shiiday ilaa
Play this playlist xisbi iyo jirsado qof walba niyadda galay wax ka badan oo xiiso leh! Dhageysiga isku dhafka ah ee 22 songs firfircooni kartaa in aad xaq ku faraxsan oo wuxuu ku raaxaysan kasta labaad sugi song kasta oo ka mid ah playlist this.
Sida sharaxaad ku leeyahay, "fiican u diyaariyaan maalin xeebta, dhinac carrada ka dul, ama gaadiid baabuur Dabaysha hufada ah marka wax walba hagaagi dareensan" tani waa qumman yahay in la sameeyo cararaan xagaaga ka sii madadaalo iyo xiiso leh!
8. aad ka dhigi doonaa boodhka ka dahab
Tani waa playlist kale ugu fiican in ay dhagaystaan ​​oo ilaa uu aroortii. Tani playlist in ay leeyihiin 22 songs hubaal ka dhigi karaan in aad dareento sida ay jiraan wax qalad ah dunida oo kaliya qorax on inaad bilawdo maalinta dhammaataan.
9. ku faraxsan
"Songs waxay igu faraxsan yahay inuu nool yahay. Waxay ii doonayaan in ay qaataan wadada safar runtii dheer dariishadaha oo hoos iyo beera-engeeg music ah." Taasi waxa uploader leeyahay dareemo in mar kasta oo ay iyadu maqlaa, kuwaas oo gabayo iyada playlist.
10. Dareen Good
Haddii aad rabto in aad qalbiga in lagu taabtay, ka dibna wuu dhegaystay this playlist qurux badan ka kooban 12 songs maan in hubaal ka dhigi doonaa inaad dareento wanaagsan ee gudaha.
Haddii aad caajistay ama in niyadda xun oo aad rabto inaad noqon niyadda gaadhay mid ka mid wanaagsan, ka dibna la dhageysto 10 playlists funny on 8track waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican in la sameeyo. Songs in keegag kuwaas oo laga yaabaa in aan xitaa badan oo dhan dareen marka aad Dhagaysta hore, laakiin ugu danbeyn, ay muuqato in ay hees aad mar walba xusuusan.
Tumblr waa bulsho dalwaddii weyn oo inta badan ka kooban yahay dhallintaada iyo dhallinyarada share in labada danaha isku mid ah iyo kala duwan. Marka laga soo tago isagoo ugu fudud in blog, this site la og yahay in ay meel wanaagsan in aad ku qosli wanaagsan; playlist ka kooban yahay 14 songs qoslo noqday Tumblr oo caan ah.
2. qoob sida idiot.3 ah
Playlist Tani waxay ka kooban tahay 12 jir songs in ay yihiin fiican ee 80 ee xisbiyada iyo Kiinteistö. Tani waa isku darka ugu fiican haddii aad rabto in aad la dheesho sida waalan oo aan la daryeelayo oo ku saabsan wax kasta oo aad ku xeeran.
3. Feelin 'Duqonka
Haddii aad rabto in aad naftaada siin ah ku qosli wanaagsan yar, ka dibna playlist waxa loogu talagalay adiga. Waxaa habboon in maqli saaxiib wanaagsan qaar ka mid ah iyo wada qosol.
4. Youtube maalintayda dhigay
Sharaxaad ayaa sheegay, "songs ugu xumaa Best iyo in internet sameeyay." Waa hagaag, haddii gabayo playlist tani waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ama ugu daran, taasi waa hubaal, waxaa adiga kaa dhigi doonaa qoslid iyo aadidda maalin sameeyo.
Tani playlist of 10 songs dhigi doonaa calooshaada dhaawaceysaa qosol. Sidaas darteed haddii aad rabto in aad saaray wax yar qoslaysa in aad maalin, listen to this on 8tracks.
Playlist Tani waxay ka kooban tahay funny 14 kuwan raadkaygay la lyrics u qosol badan in ka dhigi doonaa, waad qosli dhab ah. Waxaa fiican in ay dhagaystaan ​​ka dib maalin dheer oo shaqo lagu daalo ama dugsiga, playlist wuxuu idin siin doonaa sababaha wanaagsan ku qosla.
Tani waa isku duwidda xogta ka mid ah 8 Cajalado funny in ka dhigi doonaa in aad dhoolacadeyn iyo farxad keeno qalbigiinna iyo ka dhigi doonaa in aad dareentid in wax walba waa rainbows iyo dhicin!
8. iyo hadda wax aad u kala duwan
Playlist waxay ka kooban laba iyo toban kuwan raadkaygay in ay awood u leeyihiin in ay soo saaraan qosol (ama ugu yaraan qoslid yar) oo ay ku jiraan music by gal & Kriegelstein, Devendra Banhart, iyo Kaizers Orchestra.
9. A qoslaan waa Smile ah in Cadha
Playlist Tani waxay ka kooban tahay heesaha si ay u sameeyaan, waad qosli! Afar iyo toban kuwan raadkaygay ay ka mid yihiin music by Kokken, D Tenacious, iyo Flight ee Conchords ah.
10. Waxaan is necbahay
> Resource > Music > 50 Playlists 8tracks Great u Hawlaha kala duwan ee lagu talinayo